1 Tantara 19 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 19
Ady tamin'ny taranak'i Amona mbamin'ireo Siriana niandany taminy.
1Tatý aorian'izany, maty Naasa, mpanjakan'ny taranak'i Amona, ary ny zanany lahy no nanjaka nandimby azy. 2Ka hoy Davida: Hampiseho fankasitrahana amin'i Hanòna, zanak'i Naasa aho, fa nampiseho fankasitrahana tamiko rainy. Dia nandefa iraka hanony azy noho ny amin-drainy izy. Nony tonga tany amin'i Hanona tany amin'ny tanin'ny taranak'i Amona, ireto mpanompon'i Davida hanony alahelo azy, 3dia hoy ireo mpifehy ny taranak'i Amona tamin'i Hanòna: Mba ataonao ho fanajana an-drainao va no nanirahan'i Davida hanony alahelo anao? Tsy ny hizaha sy handrava ary hisafo ny tany va no nahatongavan'ireo mpanompony ireo atý aminao? 4Izay Hanòna dia nisambotra ireo mpanompon'i Davida, ka ny somony noharatany; ny akanjony nofolonana hatreo am-balahana, vao nalefany hody izy. 5Fa nisy nandeha nilaza ny nanjo an'ireo lehilahy ireo tamin'i Davida, ka naniraka olona hitsena an'ireo izy, fa nangaihay loatra ireo lehilahy ireo, ary izao no nasain'ny mpanjaka holazaina tamin'izy ireo: Mitoera any Jerikao hianareo, mandra-panirin'ny somotrareo, vao modia.
6Fantatry ny taranak'i Amona, fa efa nanao izay nampangidy hoditra azy tamin'i Davida izy, dia nandefa talenta volafotsy arivo Hanona sy ny taranak'i Amona hanakaramany kalesy amam-pitaingin-tsoavaly tany amin'ny Siriana, any Mesopotamia, sy tany amin'ny Siriana any Maakà sy any Sobà. 7Kalesy roa arivo amby telo alina, mbamin'ny mpanjakan'i Maakà sy ny vahoakany no nokaramainy, ka tonga nitoby tao akaikin'i Medabà izy ireo. Ny taranak'i Amona niala tany an-tanànany avy, dia nivory sy nandroso hiady. 8Nony ren'i Davida izany, nalefany hamely an'ireo Joaba mbamin'ny tafika rehetra, lehilahy mahery. 9Dia nivoaka ny taranak'i Amona, ka nilahatra hiady teo am-bavahadin'ny tanàna; iretsy mpanjaka tonga kosa nitokana teny an-tsaha.
10Nony hitan'i Joaba fa samy nisy vavahady teo anoloany sy teo ivohony, dia antokony iray tamin'izay voafantina tamin'Israely no nofidiny sy nalahany hifanatrika amin'ny Siriana, 11ary nomeny hoentin'i Abisaia rahalahiny kosa ny vahoaka sisa, ka nalahany hifanatrika tamin'ny taranak'i Amona. 12Hoy izy: Raha mahery noho izaho ny Siriana, dia handeha hamonjy ahy hianao, fa raha mahery noho hianao ny taranak'i Amona, dia hovonjeko hianao. 13Mahereza, aoka hiady amin-kerim-po isika, ho an'ny firenentsika sy ho an'ireo tanànan'Andriamanitsika, ary aoka Iaveh hanao izay heveriny ho tsara eo imasony. 14Dia nandroso niady tamin'ny Siriana Joaba sy ny vahoaka niaraka taminy ka nandositra teo anoloany ireny. 15Nony nahita ny Siriana nandositra ny taranak'i Amona, dia mba nandositra teo anoloan'i Abisaia rahalahin'i Joaba koa izy, ka niditra tany an-tanàna indray. Dia niverina tany Jerosalema Joaba.
16Rahefa hitan'ny Siriana fa resy teo anatrehan'Israely izy, dia naniraka olona haka ny Siriana tany an-dafin'ny ony izy; ary Sofaka komandin'ny tafik'i Adarezera no nitarika azy. 17Vao nandre izany vaovao izany Davida dia namory an'Israely rehetra ka nita an'i Jordany, nandroso hitsena azy sy nandahatra ny hamelezana azy ireo; ary nandahatra ny tafiny hiady amin'ny Siriana Davida. Izy ireo no nanomboka ny ady taminy, kanjo vaky nandositra teo anoloan'Israely ny Siriana. 18Ka matin'i Davida ny soavaly tamin'ny kalesy fito arivo ary ny miaramila an-tongotra efatra alina, tamin'ny Siriana; matiny mbamin'i Sofàka, komandin'ny tafika. 19Nony hitan'ireo tompomenakelin'i Adarezera fa resy eo anatrehan'Israely izy, dia nanao fanekem-pihavanana tamin'i Davida izy ireo, ka tonga mpanompony. Ary tsy nety namonjy ny taranak'i Amona intsony ny Siriana. >